दिलदार आलेले २ लाख ११ हजार हाले - Radio Tribeni FM
दिलदार आलेले २ लाख ११ हजार हाले
खेम बम , डोटी
नेकपा एमालेका केन्द्रिय वैकल्पिक सदस्य एवम् डोटी क्षेत्र नं. २ का माननिय सांसद प्रेमबहादुर आले मगरले डोटी बहुमुखि क्याम्पसलाई २ लाख ११ हजार सहयोग गर्नु भएको छ । स्वर्गिय बुवा टेक बहादुर आलेमगर र स्वर्गिय छोरी मेनुका आलेको सम्झनामा बिधार्थी छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गर्दै उहाँले सो रकमको घोषणा गर्नुभएको हो । डोटी जिल्लामा अध्ययनरत बिधार्थीहरुको शैक्षिक स्तर बढाउन र पढाई प्रति रुची जगाउन यो रकमले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने सांसद आलेको भनाई रहेको छ । २ लाख ११ हजार रकमबाट आउने ब्याजदरले प्रत्येक बर्ष उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने बिधार्थीलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गर्ने क्याम्पसका प्रमुख कृष्ण बहादुर कठायतले बताउनु भयो ।
वि.सं. २०१७ सालमा स्थापना भएको डोटी बहुमुखी क्याम्पसलाई प्राविधिक शिक्षा तर्फ उन्मुख गराउन सबैको पहल हुनुपर्ने एमाले सांसद प्रेमबहादुर आलेमगरले बताउनु भएको छ । सोमबार क्याम्पसको ५६ औं बार्षिकोत्सवमा बोल्दै नेता आलेले डोटीको राजधानी सँग डोटी क्याम्पस समेत जोडिएकाले यसको उन्नतीमा आफ्नो हरसम्भव तदारुकता रहने बताउनुभयो । अबका आगामी दिनमा आफुले विनियोजित गर्ने बजेटमा सबैभन्दा बढी डोटी क्याम्पसका निम्ति छुट्याईने समेत आलेको भनाई थियो । गरिब र ग्रमिण भेकका जनताका छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रमुख केन्द्र डोटी क्याम्पसलाई सुधार गर्न सके बसाईसराई दर लाई कम गर्न सकिनेमा उहाँको तर्क थियो । सांसद आलेले भन्नुभयो , प्रविधिक र आधुनिक शिक्षा प्रणलीको विकास डोटीमै गर्न सके बिधार्थी अन्यन्त्र किन जान्छ , अब यस बिषयमा डोटी जिल्ला बाट व्यवस्थापिका संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने ५ जना सांसदले सोच्ने बेला आएको छ , उहाँको भनाई छ । न आफु गर्न सक्ने गर्नेलाई समेत निरुत्साहित गर्ने यहाँका नेताको प्रवृत्तिमा सुधार हुँन जरुरी छ आलेको तर्क थियो ।
एक फरक प्रसंगमा बोल्दै सांसद आलेले डोटी जिल्लाको ईतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने अहिले सम्मकै बजेट आफ्नो २ बर्षको कार्यकालमा आएको ठोकुवा गर्नुभयो । आलेले भन्नुभयो , म मगरको छोरा डोटीमा मेरो जनसंख्या ३ प्रतिशत मात्रै छ , मैले आगामी दिनमा रनजनिति गर्न विकास गर्नुपर्छ तब मात्रै मलाई डोटीका जनताले पत्याउछन् । तर अरु सभासदले त चुनाव जित्नलाई नातागोता र आफन्तले सहयोग गर्लान् सांसद आलेले भन्नुभयो । आगामी दिनमा जनताले विकास प्रेमी नेतालाई चिन्ने र सबैले विकासमा लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।